စနေလင်း| January 11, 2013 | Hits:3,522
6 | | ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံးတွင် ယမန်နှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ကျင်းပသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တွေ့ရသည့် မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment PYONE January 12, 2013 - 1:07 am	American should must support to Ethnic People and UNFC, especially to Kachin People, because Kachin People are already fight for American and British [ Alliance ] in World War2. But now British and American [Alliance] are try to forget the Thanks Works of Kachin People. If so, they [ British and American ] will became Thankless Nations/People .
Reply	hotladylay January 12, 2013 - 8:30 am	ကဲ ကရင်ပြည်နယ်က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရပ်မိရပ်ဖများနဲ့ ကရင်မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူကရင်ပြည်သူတွေအပေါ်တကယ်သနားကြင်နာစိတ်ရှိပြီး အမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသူများ အခု ဇန်န၀ါရီလ (၁၃)ရက်နေ့မှာလာရောက်မဲ့ အမေရိကန်သံအမတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ တကယ်ပြည်ကရင်ပြည်သူတွေ ရရှိနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လူထုတွေရဲ့ အမှန်တကယ်ခံစားနေရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေမှန်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ့သွားအောင်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Reply	Myo Nyunt January 14, 2013 - 2:53 pm	KIA က လူပြန်ပေးလုပ် ရှမ်းရွာတွေ အနိုင်ကျင့် လမ်းတွေ